RW Cabdiweli Sheikh ?qof kasta oo dembi ku gala gudaha dalka cadaaladda ayaa la marsiinayaa? – Radio Daljir
RW Cabdiweli Sheikh ?qof kasta oo dembi ku gala gudaha dalka cadaaladda ayaa la marsiinayaa?
Diseembar 27, 2013 6:01 b 0
Muqdisho, December 27, 2013 – Ra?isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed ayaa si dheer uga hadlay qorshaha Garsoorka ee xukuumadiisa la wada sugayo iyo kaalinta ay ku yeelan doonto.
Wuxuu sheegay in dowladiisa ay aad diirada u saari doonto qorshaha cadaaladda ee dalka, wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in cadaaladda la howl-geliyo.
?Qof kasta oo Soomaali ah oo dembi galay cadaaladda ayaa la marsiinayaa.? Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed ayaa tilmaamay in loo sinaan doono garsoorka dalka.
Ra?isal wasaaraha cusub ee dalka Dr. Cabdiweli sheikh Axmed wuxuu sheegay in dowladiisa ay ku dadaali doonto horumarinta adeegyada bulshada ee kala duwan, horumarinta garsoorka iyo dhamaystirka dastuurka dalka.
11 qof oo u badan Askar oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada Dayniile ee Muqdisho